MATEGORI: Martin Vrijland
Ndiani Martin Vrijland uye nei achizvichengetedza kunyora nyaya? Mune zvinyorwa zvishoma ndakatsanangura kuti mamwe mhizha muNetherlands yakanyatsodzorwa. Ini ndiine chinangwa cheku "kutungamirirwa nebasa rakavanzika". MuNetherlands, boka racho rinonzi AIVD. Kuti ukwanise kuratidza kuti, iwe chaizvoizvo unofanirwa kupindira. Izvozvo [...]
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa 7 April 2020	• 0 Comments
Hongu zviripo! Isu tiripo. Ona chete musangano wevatori venhau waMark Rutte naHugo de Jonge nezvedanho idzva rekoronavirus. Zvinoenda chaizvo sezvaitarisirwa. Ingotarisa izvo izvo vanhu vakangotengesa mune eakanaka wakakora mazwi. Izvi ndizvo zvatiri kuzotora: Kwayedza uye kusangana nekutsvaga kuburikidza neapps uye kuyera izvo […]
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa 7 April 2020	• 13 Comments
Nekuti iyo yekumhanya kwekusimudzira kweiyo coronavirus criris inomhanya kwazvo, zvinoita sezvingangoita kuti usasimbe. Kunyange zvakadaro, ini ndoda kupa kujekesa munhandare yehondo. Izvi zvinotanga nekupfupisa kwezvimwe zviitiko zvinoshamisa. Kunyangwe zvingave zvakaoma kuramba takajeka munguva dzino dzekuchinja kukuru netariro […]
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa 6 April 2020	• 1 Comment
Murwere wepfungwa weSwitzerland Karl Jung akati, "Icho chinokupa hanya chiri kukura." Iye zvino unogona kubvunza kana iri iri mutemo wechisikirwo, nekuti unozviratidza sei chinhu chakadaro nesainzi? Isu tatojairwa kuteerera kune 'nyanzvi' uye isu zvakare tinofunga kuti kune ruzivo rwakawanda zvekuti zvinonetsa kuwana kuti […]
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa 1 April 2020	• 51 Comments
Kunyangwe kutya kukuru munharaunda uye huwandu hukuru hwe disinformation hwatekeshera pese pese, zvekuti vanhu havachaona sango kuburikidza nemiti uye vanodzoserwa nehunyanzvi kudzoka ku "nyanzvi" dzezvezvenhau nezvematongerwo enyika, ndinoda kukudaidza ita chinja chakanaka. Iko kuedza kunoratidzika […]
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa 1 April 2020	• 23 Comments
Tom Barnett anoti chiremba chakakwana. Akadzidza biomedical sayenzi asati apinda dzidziso dzechisikigo mishonga, hutano, physiotherapy, yakakwirira-yemhando mamiriro uye psychology. Akarasikirwa nevakawanda vevane makumi maviri nemakumi matatu nekuda kwekudzivirira nekukuvadzwa kwemuchina uye ave neruchiva nezve kodzero yedu yehutano hwakanaka hwemukati […]
Total Visits: 1.454.883